Ngwa 10 kacha agba ọsọ | Androidsis
Ignacio Sala | 28/07/2021 22:00 | Ngwa gam akporo
Dika teknụzụ nke smartphones etolitere, n'ime ụlọ ahịa ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka, anyị nwere ọtụtụ ngwa na -erite uru na mmalite nke ngwaọrụ ndị a nwere. nyochaa mmega ahụ site na GPS, accelerometer, gyroscope ...
Ọ bụ ezie na ha abụghị ngwaọrụ dị mma, dabere na nha ha ga-ebu anyị mgbe anyị na-apụ maka ịgba ọsọ, smartwatches dị mma, ndị nke ikpeazụ ga-agbanwe wee bụrụ ezigbo ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, n'okpuru anyị na-egosi gị kacha mma na-agba ọsọ ngwa dị na Storelọ Ahịa Play.
2 Jiri MapMyRun gbaa oso (ochie Endomondo)
3 GPS Strava: Ọsọ na ịgba ịnyịnya
4 Onye na-agba ọsọ
5 Adidas Nkuzi by Runtastic
7 Ndị Nike Na-agba Ọsọ
8 Zombies Gbaa!
9 Egwuregwu Tracker
10 Pedometer efu
Ngwa Google iji nyochaa mmega ahụ bụ Google Fit, ngwa na -enyocha mmega ahụ anyị niile site na ama ma ọ bụ wearaable. Ọ bụrụ na ị nweghị mmasị ịme ndekọ nke ụzọ site na GPS, kama ị chọrọ naanị nyochaa ọrụ gị, Google Fit zuru oke.
Ọ bụrụ na ka oge na -aga, ozi echekwara na ọrụ egwuregwu gị adịghị mkpụmkpụ, ị nwere ike họrọ otu n'ime ngwa dị iche iche anyị na -egosi gị n'isiokwu a. Google Fit dị maka ekwentị gị budata n'efu ma tinye nsụgharị maka smartaches.
Jiri MapMyRun gbaa oso (ochie Endomondo)
MapMyFitness zụtara ngwa a ma ama iji nyochaa mmega ahụ na 2020 Njedebe, ngwa nke furu efu n'oge na-adịghị anya iji tinye ya na Corre na MapMyRun. Ngwa a na-enye ọrụ niile bụ isi nke ngwa na -agba ọsọ: ijeụkwụ, anya, calorie ọkụ na oge, yana uru bara uru nke ịbụ onye ejikọtara ya na ndị na - eme ahụike na ndị na - enyocha mkpụrụ obi.
Anyị nwekwara ike tinye data dịka iri nri ma mee a Sochie anya edere na akpụkpọ ụkwụ gị na -agba. Ngwa ga -agwa gị mgbe oge ịgbanwe ha.
Ọrụ na -atọ ụtọ nke ngwa a bụ ohere nke ezipụta ụdị agbụrụ: ọ bụrụ na ị nọ na igwe ịgba ọsọ, n'okporo ụzọ, na agbata obi gị ma ọ bụ na -eje ije nkịta ... ozi bara ezigbo uru iji nyochaa arụmọrụ.
Run with MapMyRun dị maka gị budata n'efu, anaghị etinye mgbasa ozi kama ịzụrụ n'ime-ngwa iji kpọghee ohere ịnweta atụmatụ niile.
Jiri MapMyRun gbaa ọsọ
GPS Strava: Ọsọ na ịgba ịnyịnya
Ọ bụrụ na ị kewaa usoro ihe omume gị site na mmega n'etiti ịgba ọsọ na ịgba ígwè, ngwa ngwa Strava bụ oke nhọrọ. Dashboard dị iche iche na-edekọ nkọwa zuru ezu nke mgbatị gị, dị ka uru dị elu, gbakwunye metrik ọdịnala dịka ijeụkwụ, anya, na oge.
Ihe ọzọ pụrụ iche bụ Ndu ndú, baajị mmezu, na ihe ịma aka na -akwali gị imezu ebumnuche gị. Ngwa a dị mma maka ndị na -achọ ịgba ọsọ na mpụga ọ na -emebu.
GPS Strava dị maka ekwentị gị budata n'efu, Anaghị etinye mgbasa ozi mana ọ bụrụ na ịzụrụ n'ime-ngwa iji nweta ihe kachasị na ngwa ahụ.
RunKeeper (sitere na otu egwuregwu Asics) otu n'ime ngwa izizi iru n'ahịa mkpanaka Iji nyochaa ọrụ egwuregwu mgbe ị na-agba ọsọ, ọ bụ ngwa dị mfe ma dị mfe iji dekọọ ijeụkwụ gị, ebe dị anya, calorie ọkụ, oge na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịlele agbụrụ ndị gara aga ka ị hụ ọganihu gị na jiri ụzọ ndị etinyere n'ime ngwa ahụ iji chọpụta ụzọ ọhụrụ.
Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka ndị mbidodịka ọ na-enye data na-agba ọsọ iji nyere gị aka ịbanye na usoro ọhụụ gị ma gosipụta ozi bara ezigbo uru nke ndị ọgba ọsọ nke ọkwa ọkwa ọ bụla ga-enwe ekele.
RunKeeper dị maka ekwentị gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
RunKeeper - GPS Na-agba Ije
Developer: Ụlọ ọrụ ASICS Digital, Inc.
Adidas Nkuzi by Runtastic
Ngwa ọzọ a ma ama, Adidas Running App nke Runtastic, bụ nke nkiti na-agba ọsọ nke na -ejikọ na Google Earth iji mee ka ọ dị mfe ịchọta ụzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na -agba ọsọ n'obodo.
Nchịkọta nke ngwa a dị mma, yana eserese na tebụl ndị ahụ gosi oganihu gi na ha na-ekwe ka mfe nkekọrịta na netwọk mmekọrịta. Ngwa a gụnyere nsụgharị maka smartwatches nke na-enye anyị ohere ịchịkwa ọrụ nke ngwa ahụ ma mara ọganiihu oge niile.
Abịa na mmemme ọzụzụ etinyere na ọbụnadị na Spotify na Pandora na-emekọrịta ka ha nwee ike gbaa egwu a. Ngwa a dị mma maka ndị njem na -agba mgbe niile n'obodo ọhụrụ yana maka ndị na -achọ akụkọ akọwapụtara nke ọma data ha na -agba.
Adidas Na-agba ọsọ site Runtastic dị maka gị ụdị download n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ngwa iji mepee ohere maka atụmatụ niile.
adidas Running by Runtastic - Na-agba ọsọ na mma
Otu n'ime ụlọ ọrụ egwuregwu dị ka Asics na Adidas, nke na-enye anyị ngwa iji nyochaa ọrụ egwuregwu anyị, anyị na-ahụ ya na ụlọ ọrụ Puma, lỤlọ ọrụ ngwongwo nke atọ n'azụ Nike na Adidas, na nke dị ka Asics na Adidas, si Germany.
Pumatrac na-enye ọmarịcha interface na niile uru nke isi ngwa maka ịgba ọsọ, mana enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ iji nye ọhụụ zuru ụwa ọnụ maka mgbatị ahụ gị.
Ngwa a na -anakọta ozi ndị ọzọ nwere ike imetụta ọrụ gị, dịka ihu igwe, oge ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị nke ọnwa, na na -enyocha ya iji nweta ozi nkeonwe. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike chọpụta na ị na -agba ọsọ kacha mma n'ụtụtụ Fraịde tupu elekere iri, ma ọ bụ na ị na -agba ọsọ ọsọ karịa mgbe ị na -ege egwu egwu.
Pumatrack dị maka gị budata kpamkpam n'efu, anaghị etinye mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụta n'ime ngwa ahụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọghị imefu ego na ngwa iji nyochaa egwuregwu gị, Pumatrack bụ ezigbo nhọrọ.
Ọrụ PUMATRAC, ọzụzụ, ịgba ọsọ, mgbatị ahụ
Developer: Ụlọ ọrụ PUMA SE
Ndị Nike Na-agba Ọsọ
N'ụzọ doro anya, ngwa sitere n'aka ndị na -emepụta ngwongwo egwuregwu Nike enweghị ike ịpụ na ndepụta a. Ọ dịghị mkpa ịnweta ngwaahịa Nike iji nweta uru nke ngwa a. na -enye anyị ohere ịhọrọ tebụl anyị na -agba ọsọ na ya (treadmill, trails, sidewalk) ka ịdekọ ije anyị, anya, kalori ọkụ na oge.
Ihe dị iche na ngwa a bụ nhọrọ egwuregwu maka ịkọrọ onwe gị ihe mgbaru ọsọ gị, maa ndi enyi gi aka ma tie ihe ndekọ nke onwe gị. I nwekwara ike bulite egwu na-akpali akpali igwu egwu mgbe ịchọrọ mgbakwunye na ọrụ gị.
Nike Run Club dị maka nke gị budata kpamkpam n'efu, anaghị etinye mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụta n'ime ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na ugbu a, ị naghị ewere isiokwu nke ileba anya na mmega ahụ ha nke ọma, ị nwere ike bido jiri ngwa Zombies Run, ngwa na -akpọ anyị oku ka anyị jiri ekweisi iji kpalie anyị ịgba ọsọ. Gbanahụ ọtụtụ zombies.
Ka ị na-aga ije, a zuru okè mix nke ọdịyo na song ejije nke ndepụta ọkpụkpọ nke gị, iji kpalie anyị ka anyị na -agba ọsọ n'ihu zombies ndị na -enye anyị nsogbu.
Zombies Gbaa! dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ngwa nke na-enye anyị ohere ịnweta ọrụ niile ọ na-enye anyị yana na ha enweghị ntakịrị ma ọ bụ ihe ọ bụla iji ziga na ngwa ndị ọzọ anyị gosiri gị n'isiokwu a.
Zombies, Gbaa! (Free)
Developer: Isii ịmalite
Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka a maara nke ọma dị ka ọtụtụ n'ime ngwa na m gosiri gị n'isiokwu a, Sports Tracker obere ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla ga -emere ha anyaụfụ. Ekele a na ngwa, anyị nwere ike gbanwee anyị ama n'ime a n'akpa uwe na kọmputa nke ga-soro niile anyị na-emega ahụ.
Na mgbakwunye, ọ na-elekọta nyochaa nsonaazụ ọzụzụ iji gwa anyị otu anyị ga - esi meziwanye ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmerụ ahụ ga - emetụta mmerụ ahụ anyị. Otu n'ime ike nke ngwa a bụ na ọ na-etinye usoro eserese nwere ụzọ edobere tupu e nwee agba ịnyịnya ígwè, ugwu, ụzọ gasị ...
Egwuregwu Tracker dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji kpọghee ohere niile atụmatụ ọ na-enye anyị.
Sports Tracker agba ọsọ agba ígwè
Developer: Amer Egwuregwu Dijitalụ
Site na aha a na -achọsi ike nke yiri ka ọ na -akpọ anyị oku na ngwa ihere, anyị na -achọta ngwa jiri ihe karịrị 800.000 nyochaa na nkezi ọkwa nke 4,7 kpakpando, si otu a bụrụ otu n'ime ngwa amapụtara nke ọma site na iji ndị ọrụ ngwa.
Ngwa a bụ pedometer na tracker mgbatị ahụ nke na-erite uru na Sensọ wuru n'ime ekwentị anyị iji debe usoro, ịga ije na oge ịgba ọsọ, yana ụzọ na-enweghị mgbagwoju anya ederede iji rụọ na ndabere.
Ndị ọrụ nwere ike iso gị akụkọ ihe mere eme na ọnọdụ, lelee ụzọ gị, mepụta ebumnuche ahụike ahụike, ma sonye na ihe ịma aka na otu mkpali iji gbakwunye otu mmekọrịta mmadụ na mgbatị. Ngwa ahụ na-arụ ọrụ yana ebe ahụike ndị ọzọ dị ka Google Fit, MyFitnessPal na Fitbit
Niile atụmatụ ndị a dị kpam kpam n'efu, ndị debanyere aha nke adịchaghị nwere atụmatụ ndị ọzọ dịka mgbatị ahụ a na -eduzi, atụmatụ ịbelata ibu, ikike iji mekọrịta usoro kwa ụbọchị, anya, na data ọrụ ndị ọzọ na-akpaghị aka site na ngwaọrụ Garmin ma ọ bụ Fitbit na akaụntụ Pacer gị (onye nrụpụta ngwa).
Pedometer efu dị maka gị budata n'efu, Ha nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji kpọghee ohere niile nke ọ na-enye anyị, atụmatụ ndị na-adịchaghị ole na ole.
Pedometa efu - Nzọụkwụ na Calorie Counter
Developer: Ahụike Pacer
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Top 10 na-agba ọsọ ngwa
Reface, ngwa kachasị mma iji mepụta omimi miri emi